Falal dhac ah oo ay geystaan dhalinyarro soomaali ah oo ka bilowday Sweden | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Falal dhac ah oo ay geystaan dhalinyarro soomaali ah oo ka bilowday...
Falal dhac ah oo ay geystaan dhalinyarro soomaali ah oo ka bilowday Sweden
Magaaladda Göteborg ee caasimadda labaad ee dalka Sweden ayaa waxaa ay ka mid yihiin ay soomaalida degan yihiin, halkaas oo ay noloshooda siyaallo kala duwan u maareeyaan.
Dhowrkii toddobaad ee tagay ayaa waxaa magaaladda ka dhacay falal la xirriira dhac loo geeystay dukaaman oo la sheegay ay dhalinyarro soomaali ah qaarkood lug ku leeyihiin.Bishii i ina dhaaftay ayaa xaafadda Hjällbo oo ka mid ah xaafaddaha ay ajaanibta iyo soomaalida ku badan tahay, gaar ahaan agagaarka Eriksbo waxaa ka dhacay fal dhac ah oo ay geeysteen afar wiil soomaali ah kuwaas oo dukaan xaafadda ku yaalay ay ka geeysteen dhac islamarkaasina dhaawac u geeystaoo ay mulkiilihii dukaanka.
Toddobaadkii hore ayaa waxaa mid ka mid ah xaafadda ay soomaalidu degan tahay waxaa ka dhacay fal dhac ah oo loo geeystay dukaan xaafadeedka ku yaala lama oga waxa ay ka qaateen markii ay falkaasi geeysteen, hase ahaatee falkan ayaa loo xiray afar dhalinyarro oo maalin ka dib la soo qabtay. Dadka deegaanka oo ay shabakadda wararka Somaliska.com xirriiro la sameeysay ayaa sheegay in dhalinyaradaasi weli boolisku hayo, halka mid la sii daayey.
Lama oga waxyaabaha dhalinyaraddan soomaalida Göteborg ku kalifa falalkan dhaca ah ee ay u geeystaan dukaamo xaafadeedyadda. Tanina waxaa ay wel wel ku abuurtay waalidiin badan. Somaliska.com oo isku dayday ineey xirriiro la sameeyo qaar ka mid ah waalidiinta dhalinyaradaasi ayaan noo suuragelin inaan helno warbixin intaan ka badan.